Yusuf Garaad: February 2015
Dagaalka Guriceel kuma dhiman doonaan dadka amarkiisa dhiibaya oo qaarkood laga yaabo in ay meelo fog fog joogaan.
Kuma dhiman doonaan nimanka u sarreeya ee hoggaaminaya dagaalka.
Lagumana dili doono kuwa hubka daabbula iyo kuwa shidaalka iyo lacagta dagaalka bixiya.
Si kama dambeys ah looguma kala adkaan doono maaddaama ay dadka degaanku ku kala qeybsan yihiin.
Marka ay xabbadu istaagto waxaa magaalada degganaan doona dhammaan dadkii hore u degganaan jiray marka laga reebo kuwa dagaalka ku dhintay iyo kuwa ku dhiman doona.
Xabbad nin xal ku raadiya haddii aad aragto siyaasadda ayuu caammi ka yahay ama uu ku fashilmay ama labada ayaa isu raacay.
Posted by Yusuf Garaad at 20:07:00
Cabdishakur Mire Adan, Allah ha u naxariistee waxaan isku barannay Dugsiga Hoose ee Buulo Burte, halkaas oo aabbihiis, Ustaad Mire Adan, iyo hooyadiisba ay macallimiin ka ahaayeen.
Waxaanse si wanaagsan isugu barannay Muqdisho. Waxaa uu ahaa qoraa wargeyska Xiddigta Oktoobar iyo qoraa sheekooyin badan oo buugaag uu ka daabacay oo ardayda iskuulladu ay akhrisan jireen.
Baaris uu ku sameeyay taariikhda Islaamiyiinta Soomaaliya 1952 - 2002 wuxuu ka qoray Kutub - Kobacii Islaamiyiinta Soomaaliya.
Wuxuu ka baxay Dugsiga Sare ee badda, berigii qaxu dhacayna mar ayuu ku shaqeeyay badmaaxnimo.
Siyaasadda Puntland waxaa uu ahaa raggii la jaanqaaday billowgii ugu horreeyayba. Wuxuuna ka mid yahay Wasiirrada ugu wakhtiga dheeraa Puntland.
Hadda wuxuu degganaa Muqdisho oo uu siyaasadda ka qeyb qaatay isaga oo Guddoomiye ku Xigeen ka ahaa Xisbiga Daljir.
Wuxuu ahaa nin hadallo geesi, wuxuuna ahaa mufakir isku daya in uu fahmo danaha iyo xiriirrada dadka Soomaaliyeed ee xag bulsho, siyaasad, dhaqaale iyo amni. Una fahmo si ka qoto dheer inta dadka aan aad u fekerini ay meel walba la taagan yihiin.
Wuxuu ahaa nin saaxiibtinnimo iyo aammin gala. Wuxuu ahaa nin Allah ka cabsi leh. Wuxuu ku kalsoonaa Soomaalinnimadiisa mana aamminsaneyn in uu cid marti uga yahay ku lug lahaashada masiirka ummadda Soomaaliyeed.
Ilaaheey waxaan uga baryayaa in uu ka waraabiyo jannadiisa.
Hadda ka hor annaga oo joogna Nairobi ayuu iiga warramay khatarta Shabaab. Wuxuu i soo xasuusiyay markii ay in yar ka dib weerareen Westgate. Ka akhriso dhanka bidix ee boggaan. Eeg dhanka bidix ee boggan oo dhag sii si aad u akhrisato wadahadalkii aniga iyo isaga ina dhex maray.
Marka uu fal dembiyeed dhaco, kaalinta Dowladdu waa baaritaan iyo garsoor. Ma ahan wacdi iyo qalbi qaboojin keliya.
War maanta ka soo baxay Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha oo Ku Xigeenka Ra'iisal Wasaaruhu uu soo saaray, oo daba jooga dilkii shalay ka dhacay isgoyska Nambar Afar ee Muqdisho waxaa cinwaankiisu yahay: “Geeridu waa xaq, qof walbana wakhtigiisa dhaafi maayo”.
Warka oo saddex paragraph ahaa kuma jirin meel ciidanka lagu farayo ama shacabka loogu sheegayo in baaritaan la sameynayo weerarkii ka dhacay bartamaha magaalada ee afar muwaaddin oo madax iyo shaqaale dowladeed ah lagu dilay.
Ka muwaaddin ahaan, ima qancin in dilkii shalay ka dhacay Nambar Afar ay jawaabta Xukuumaddu noqotay in aan qofna wakhtigiisa dhaafeyn.
Waxay ila tahay in aan ognahay in Qofna aanuu wakhtigiisa dhaafeyn. Haddii ay tahay in la is wacdiyana, Masjidka ayaa Dowladda uga habboon.
Posted by Yusuf Garaad at 10:39:00
Waxaan daawaday barnaamij TV oo saynisyahan British ahi uu baarayo bal in nolol kale oo midda aan naqaan ahayni ay ka jirto dunida.
Wuxuu badda hoos u galay 2 km si uu u eego qabowga iyo mugidiga meeshaa ka jira in ay nololi ka jiri karto.
Wuxuu eegay lama degaanka Atacama (Atakama) oo 50 jeer ka sii qallalan midka Sahara.
Wuxuu booqday goobo kale oo ay ka mid yihiin buuro barafoobay iyo volcano aan demin oo ku yaal degaanka Cafarta Ethiopia.
Wuxuu adeegsanayay ereyga "ilbaxnimadeyda", asaga oo ula jeeda ilbaxnimada Aadanaha.
Gunaanadkii waxaa uu fasiray macnaha ay sameyneyso haddii nolol laga helo meerayaal kale oo ka tirsan carra edeg.
Waxaan soo xusuustay dood uu xilli aan fogeyn iila yimid mudane ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya. Wuxuu wakhti dhan geliyay in uu ii fasiro wax uu isagu u yaqaan “Ku dhashay” iyo “U dhashay” oo uu siyaasad ka dhigayo.
Barnaamijka baadi goobaya in Mars iyo Jupiter ay nololi ka jiri karto ee raba in uu i baro sida looga faa’iidi karo iyo wey isu key qaban waayeen Xildhibaanka raba in uu i baro “Ku dhashay” iyo “U dhashay” .
Fadlan ra'yigaaga xagga hoose ee isla boggan ku reeb.
Posted by Yusuf Garaad at 15:53:00